विचारदृष्टिकोण – Complete Nepali News Portal
विचारदृष्टिकोण	हामि किन जन्मन्छौ अनि किन मर्छौ ? जान्नै पर्ने !!
June 24, 2017	विचारदृष्टिकोण
June 23, 2017	Politics, विचारदृष्टिकोण
June 23, 2017	विचारदृष्टिकोण
आफ्नो घरमा आगो लागेको बेलामा अर्काको घरको आगो निभाउन खोज्दा आफ्नो घर खरानी हुन्छ । पहाडका दल मात्र होइन मधेसवादी दलहरु पनि यो बिषयमा गम्भीर हुने बेला आएको छ । बुढा पाकाले भन्थे , जति सुकै माया गरेपनी र जति सुकै राम्रीभए पनी जेठी स्वास्नी लोग्ने को लागी कहिल्ले प्यारी …
पूर्वराष्ट्रपतिकी छोरी अनिताले बल्ल गोर्खाल्याण्डबारेमा मुख खोलिन् – दार्जलिंगको नेपाली बोल्ने व्यक्ति नेपाली नै हैन भिडियो सहित काठमाडौँ : दार्जलिंगमा बसोबास गरी रहेका नेपाली मुलका हरुले आफ्नो अधिकार, सम्मान र स्वाधिनताको बिषयलाई मूल मुद्धा बनाएर राष्ट्रमा आफ्नो पहिचानको लागी लड्दा नेपाली हरुको फेसबुकमा बढो जोडका तोड संग समर्थन गरेको देखिन्छ …
June 22, 2017	विचारदृष्टिकोण
दार्जिलिङ्का नेपाली भासीहरु जब आफुले आफुलाई नेपाली भन्न रुचाउदैनन् भने हाम्रो पुर्खाले कमाको शान “गोर्खाली” नाम किन चोर्दै छन् ?
दार्जिलिङ्का नेपाली भासीहरु जब आफुले आफुलाई नेपाली भन्न रुचाउदैनन् भने हाम्रो पुर्खाले कमाको शान “गोर्खाली” नाम किन चोर्दै छन् ? जसरी अहिले buddha को जन्म india मा भएको भनेर भ्रम फैलिएको छ, पछि के थाहा GorkhaLand को कारण Gorkha पनि भारत कै कुनै ठाउँ हो, त्यो सबै वीर गोर्खालीहरु भारती …
-अश्विनी कोइराला आखिर २५ वर्ष अघि रचिएको चक्रब्युहमा नेपाली मज्जाले परे संविधानसभाका लागि गाउँ–गाउँमा सुझाव संकलन गर्न जाँदा करिब ९० प्रतिशत मानिसले नेपाललाई पुन: हिन्दु धर्म राष्ट्रसहितको संविधान जारी गर्न सुझाव दिए । तर १० प्रतिशतले धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नै हुनुपर्ने बताए । तै पनि १० प्रतिशतले दिएको सुझाव ९० प्रतिशतको …
याद राखौ दार्जिलिङ्का नेपाली भासीहरुले “GorkhaLand” लाई देशको रुपमा हैन भारतमै आफ्नो छुटै प्रदेश् मागेको हो !
June 21, 2017	विचारदृष्टिकोण
Send us By : Kumar Dhanuke (Facebook) थाहा छैन मैले यहाँ यस्तो भन्न हुन्छ कि हुन्न… सबैको अा आफ्नै सोच हुन्छ तर भुल्चुक भए माफी पाऊ… जसरी अहिले buddha को जन्म india मा भएको भनेर भ्रम फैलिएको छ, पछि के थाहा GorkhaLand को कारण Gorkha पनि भारत कै कुनै ठाउँ …
कुनै पनि हालतमा हाम्रो गोर्खाल्याण्ड चाहियो !! हामीहरुलाई बङ्गाल सँग बस्नु छैन !!
June 20, 2017	विचारदृष्टिकोण
बङ्गालीहरु हामीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक सम्झिन्छन्। गोर्खालीहरु लाई यो स्विकार्य छैन १९८६ को जुलाई महिनाको २७ तारिख थियो। आइतबारको दिन कालिम्पोंगको मेला ग्राउण्डमा हजारौँ मानिसहरुको भिड जम्मा थियो। यी मानिसहरु गोर्खाल्याण्ड राज्यको समर्थन र १९५९ को भारत-नेपाल सन्धिको बिरोधमा त्यहाँ पुगेका थिए। यसमा सामेल हुन आइरहेका केहि मानिसहरुले कालिम्पोंङको थाना …
Page 1 of 2312345	»	1020...Last »	RecentPopularCommentsTags	तिमि जादा पराइ को डोलीमा…. हाम फालेर मर्छु म खोलिमा………मार्मिक गित भिडियो